कसरी गर्ने जाडोमा छालाको हेरचाह ?::Hamrodamak.com
कसरी गर्ने जाडोमा छालाको हेरचाह ?
जाडो भए पनि पानी प्रशस्त पिउँनुपर्छ।
काठमाडौं । छाडो मौसम सुरु भएसँगै छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छ। विशेषगरी जाडो याममा सुख्खा हुने भएकाले छाला खस्रो हुने, फुट्ने गर्छ।
सामान्यतया जाडो महिनामा पानी कम पिउनाले पनि छालामा सुख्खापन आउने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। जाडो भए पनि पानी प्रशस्त पिउँनुपर्छ।
यसका साथै चिसो हावाले पनि शरीरमा भएको पानीलाई सोस्छ र छाला फुट्छ। सकेसम्म जाडो याममा बाहिर निस्कँदा शरीर पूरै ढाक्ने खालका लुगा लगाउनुपर्छ।
जाडोयाममा प्रायः हातखुट्टा, ओठ, अनुहार र आँखामा बढी असर पर्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि हातखुट्टामा मोइस्चाराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ।
धेरै तातो पानीले नुहाउनु हुँदैन। तातो पानीले त्वचामा असर पु¥याउँछ। मनतातो पानीले नुहानउ भने सकिन्छ।